I-Wholesale 1 namapheya angu-2 I-J Bar Rooftop Kayak Rack enezintambo zokubopha phansi yabakhiqizi nabahlinzeki bebhodi le-Canoe kanye ne-Surf Board |Izesekeli zomholi
Ipheya engu-1 kanye namapheya angu-2 we-J Bar Rooftop Kayak Rack enezintambo ezibophezelayo zeBhodi Lesikebhe kanye ne-Surf
Zombili Izesekeli Zomholi 2 ama-pcs kayak rack kanye nama-4 ama-Kayak rack anokubukeka okudumile, iqinile futhi kulula ukuyifaka, irack ingabamba ububanzi obubanzi be-kayak nosayizi bezikebhe, ngalokhu, awudingi ukudonsa i-kayak yakho. noma i-SUP ukusuka ekhaya lakho ukuya kwenye indawo efana namachibi, ngakho-ke kuyisinqumo esihle ukuba ne-kayak roof rack yemoto yakho uma uzokhempa.
Into NO.: 101244, 102056
I-Kayak, isikebhe, i-surfboard ezokuthutha
- Isiphathi se-kayak sikasayizi wesitayela esifanelekile sidala isitoreji esiwusizo esengeziwe semoto yakho.
- Izingxenyekazi zekhompuyutha eziqinile nezimelana nokugqwala okulula ukuzivula nokuvala kuqinisekisa ukufakwa nokususwa ngokushesha.
- Kulula ukusetha.
IPHESI eli-1 (amarack ama-2 we-kayak engu-1)
AMAPHEKHI A-2 (ama-racks angu-4 ama-kayak angu-2)
isethi obandayo izesekeli
1 imiyalelo yokuhlanganisa
Qaphela: ilingana neningi lefekthri kanye nezikwele zangemuva kwemakethe, ama-oval, nama-crossbar ayisicaba.Sicela uhlole usayizi wayo, uhlobo, nesimo ukuze uqiniseke ukuthi yikho kanye okudingayo.
● Kokubili i-rack J eyodwa(ipheya eli-1) kanye ne-kayak J ephindwe kabili(amapheya angu-2) ingakusiza ukuthi unwebe indawo yokugcina imoto yakho futhi ugweme ingcuphe yokona i-kayak yakho ngesikhathi usendleleni eya endaweni oya kuyo.
● Umsebenzi osindayo, le rakhi ye-kayak ayifanele ibha eyindilinga, ukwakhiwa kwensimbi okuhlanganiswe namandla kwenza le rack iqine futhi ingagqwali kalula.Khiya i-kayak yakho noma isikebhe siqine ngokugcwele, 8 FT ubude, 150 LBS ihloliwe, kulula futhi kuphephile ukuthuthwa.
Izinjongo eziningi: kulula ukuyifaka, le rack ye-kayak ingase isetshenziselwe ukuthwala i-kayak, isikebhe, i-surfboard, ne-SUP.
Nciphisa ukuklwebheka: idizayini eyengeziwe enagwebu elinegwebu ukuvimbela isikebhe noma i-kayak ukuthi ingaklwebheki.
Okwedlule: 2 ku-1 I-Aluminium Rooftop Folding J Bar Kayak Car Roof Rack ye-Canoe Surfboard SUP
Olandelayo: Ukugoqa i-J Bar Kayak Roof Rack 2 PCS kanye nama-PC angu-4 Isethi Ngayinye Yebhodi Le-Canoe Surf kanye ne-SUP enama-4 Pcs Tie Down Straps